कृषक सीता नेपालीसँग साहित्यका कुरा : 'पुस्तक प्रकाशन गर्ने इच्छा' | दर्पण दैनिक
प्रकाशित मिति: २०७८ जेष्ठ १३ गते ०७:०२
तपाईंको बुझाईमा साहित्य भनेको के रहेछ ?
‌साहित्य भनेको समाजको ऐना हो । जसमा समाजका विकृती, विसंगती, रसरंग, खुसी, सुखदुख, मिलन बिछोड, हरेक कुरालाइ विभिन्न विद्यामा ढालेर सिर्जना गरिन्छ । समाज रुपान्तरणमा यसको भुमिका महत्त्वपूर्ण रहेको पाइन्छ ।
साहित्यका विभिन्न विद्याहरुमध्ये तपाईं कुन विद्यामा कलम चलाउनुहुन्छ ?
म विभिन्न विद्यामा कलम चलाउछु । जस्तैः हाइकु, सेन्यु, कटौता, मनोबाद, गजल, कविता, मुक्तक, गित, बाछिटा, गेडि, तियाली आदि ।
किन यही विद्यालाई रोज्नु भयो ?
म सानै देखि लेख्थें बाचन गर्थेँ । मलाइ यो क्षेत्र अति मन पर्छ । गजल चाहिँ अलि पछि नै लेख्न थालेकी हुँ । छन होला लगभग एक दर्जन जति । पुस्तक चाहिँ प्रकाशित गरेकी छैन । पछि प्रकाशन गर्ने सोचमा छु ।
अन्य क्षेत्रभन्दा साहित्य क्षेत्र पछाडी पर्नुको कारण केके हुन सक्छन् ?
साहित्य क्षेत्र पछाडि पर्नुको कारण राज्यस्तरबाट नहेरिनु हो । कुनाकाप्चामा लुकेका प्रतिभाको खोजी नगर्नु हो ।
साहित्य क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ ?
आफ्नो मन परेको विद्यामा सशक्त कलम चलाउनुस् । साहित्यबाट समाजलाई हामीले धेरै चेतना दिन सक्छौँ । परिवार, समाज अनि राष्ट्रलाई बदल्न साहित्यको भुमिका अपरिहार्य छ ।